Wararka - Mexico International Auto Parts Expo 2020
Magaca Carwada: Mexico International Parts Expo Expo 2020
Waqtiga bandhigga: Luulyo 22-24, 2020
Goobta: Xarunta Bandhigga Centro Banamex, Magaalada Mexico
Bartamaha Ameerika (Mexico) Qaybaha Gawaarida Caalamiga ah iyo kadib bandhigga iibka 2020
PAAC Automechanika Mexico
Waqtiga bandhigga: Luulyo 22-24, 2020 (sanadkiiba mar)
Qabanqaabiyaha: Bandhigga Frankfurt (USA) Ltd.
Bandhigga Frankfurt (Mexico) Xaddidan
Sida bandhiga ugu weyn uguna muhiimsan ee Mexico iyo Bartamaha Ameerika suuqyada iibka kadib, 20ka qaybood ee Auto Auto iyo kadib bandhigga iibka ee Bartamaha Ameerika (Mexico) waxaa lagu qaban doonaa Banamex Exhibition Center, Mexico City laga bilaabo Luulyo 22 ilaa 24, 2020. Waxaa jira in ka badan 500 oo bandhigyaal ah oo ka kala yimid adduunka oo idil, oo ay ku jiraan kuwa ka yimid Argentina, Shiinaha, Jarmalka, Turkiga, Mareykanka iyo Taiwan. In ka badan 20000 oo soo booqdeyaal xirfadlayaal ah oo ka socda warshadaha baabuurta ayaa soo booqday.
Bandhigyaashu waxay ku qanacsan yihiin natiijooyinka bandhigga, oo sidoo kale muujinaya muhiimadda Automechanika Mexico ee warshadaha. Mar labaad, bandhiggu wuxuu noqday barxadda ugu weyn ee isku xirka go'aan qaadayaasha waaweyn ee suuqa baabuurta ee Mexico iyo Bartamaha Ameerika.
Intii lagu guda jiray bandhigga saddexda maalmood ah, go'aan qaadayaasha muhiimka ah ee ka socda qaybaha warshadaha ee ka socda Mexico, Latin America iyo waddamo kale ayaa halkan u jooga inay ka helaan waxyaabaha ugu horumarsan, adeegyada iyo iskaashiga ka dhexeeya gudaha warshadaha, fahamka horumarka shakhsi ahaaneed ee gawaarida iyo ballaarinta ganacsigooda.
Shiinaha iyo Mexico labaduba waa waddamo waaweyn oo soo koraya iyo dalal suuq muhiim u ah oo soo ifbaxaya. Labadooduba waxay ku jiraan marxaladda halista ah ee dib-u-habeynta iyo horumarka. Waxay la kulmayaan hawlo iyo caqabado isku mid ah, labada dalna waxay siinayaan midba midka kale fursado horumarineed. Bishii Nofeembar 13, 2014, Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping wuxuu wadahadallo la yeeshay madaxweynaha Mexico, PEIA, Hoolka weyn ee dadka. Labada hoggaamiye dowladood waxay dejiyeen jihada iyo naqshadda horumarinta xiriirka Shiinaha Mexico, waxayna go'aansadeen inay abuuraan qaab cusub oo iskaashi "hal labo saddex" ah si kor loogu qaado horumarinta Shiinaha iskaashi istiraatiijiyadeed oo dhameystiran.
Mexico waa mid ka mid ah wadamada leh tirada ugu badan ee heshiisyada ganacsiga xorta ah ee adduunka. Shirkadaha ku yaal Mexico waxay ka iibsan karaan qaybo iyo kheyraad dalal badan, waxayna had iyo jeer ku raaxaystaan ​​daaweyn bilaash ah. Shirkaduhu waxay si buuxda ugu raaxaystaan ​​canshuuraha NAFTA iyo dookhyada kootada. Mexico waxay fiiro gaar ah siisaa horumarka kaladuwan ee soosaarka iyo wax soosaarka warshadaha, waxayna si guul leh ula xiriirtay Yurub, Aasiya iyo Latin America heshiisyo ganacsi oo xor ah iyo qandaraasyo lala galo ururada dhaqaalaha.
Latin America, Mexico waxay saxiixday heshiisyo ganacsi oo xor ah (TLC) oo ay la gashay Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Chile, Nicaragua iyo Uruguay wax soo saarkooda iyo adeegyadeeda, waxayna la saxiixatay heshiisyo iswaafajin dhaqaale (ACE) Argentina, Brazil, Peru, Paraguay iyo Cuba.
Iyada oo ay ku nool yihiin qiyaastii 110 milyan, Mexico waa suuqa labaad ee ugu weyn Latin America waana mid ka mid ah kuwa ugu weyn adduunka.
Qeybta gawaarida waa waaxda ugu weyn ee wax soosaarka ee Mexico, oo ka dhigan 17.6% qaybta wax soo saarka waxayna ku kordhisay 3.6% wax soo saarka dalka.
Mexico ayaa hada ah wadanka afaraad ee ugu dhoofinta badan gawaarida marka laga soo tago Japan, Jarmalka iyo Kuuriyada Koofureed, sida uu sheegay Cosmos-ka Mexico. Sida laga soo xigtay warshadaha baabuurta ee Mexico, sanadka 2020, Mexico ayaa la filayaa inay noqoto tii labaad.
Sida laga soo xigtay xogta Ururka Iskaashatooyinka Gawaarida ee Mexico (AMIA), suuqa gawaarida ee Mexico wuxuu sii waday inuu kordho Oktoobar 2014, iyadoo soo saarista, iibka iyo dhoofinta baaxadda baabuurta fudud. Bishii Oktoobar ee sannadkan, soosaarida gawaarida fudud ee Mexico waxay gaareen 330164, koror 15.8% ah isla muddadii sanadkii hore; tobankii bilood ee ugu horeeyey, waxsoosaarka isugeyntu ee dalku wuxuu ahaa 2726472, korodh 8.5% sanad-sanad ah.
Mexico waxay noqotay wadanka shanaad ee aduunka ugu badan soo dejiya qaybaha baabuurta iyo alaabta ceyriinka ah, waxsoosaarkeeda waxaa badanaa lasiiyaa warshadaha gawaarida ee kuyaala Mexico. Dakhliga sanadkii la soo dhaafay wuxuu gaaray $ 35 bilyan, taasoo ka tarjumeysa awooda warshadaha qeybaha gawaarida, taasoo sii kordhin doonta shirkadaha wax soo saara. Dhamaadkii sanadkii hore, qiimaha wax soo saar ee qeybaha dayactirka ayaa ka batay 46%, taasi waa, US $ 75 bilyan. Waxaa lagu qiyaasay in qiimaha waxsoosaarka warshadaha uu gaari doono US $ 90 bilyan lixda sano ee soo socota. Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta, alaabada fasalka 2 iyo heerka 3 (alaabooyinka aan u baahnayn in la naqshadeeyo, sida boolal) ayaa leh rajooyinka horumarka ugu weyn.
Waxaa lagu qiyaasaa in sanadka 2018, soosaarka sanadlaha ah ee gawaarida ee Mexico uu gaari doono 3.7 milyan oo gawaari ah, ku dhowaad labo jeer wax soo saarkii sanadkii 2009, iyo baahidiisa ku aadan qeybaha gawaarida ayaa si aad ah loo kordhin doonaa; isla mar ahaantaana, celceliska nolosha baabuurta gudaha ee Mexico waa 14 sano, oo waliba soo saarta baahi weyn iyo maalgashi loogu talagalay adeegga, dayactirka iyo qaybaha beddelaadda.
Horumarinta warshadaha baabuurta ee Mexico ayaa ka faa'iideysan doonta soosaarayaasha qaybaha baabuurta adduunka. Ilaa hadda, 84% ka mid ah 100-ka ugu sarreeya adduunka soosaarayaasha qalabka baabuurta ayaa maal-galiyay oo soo saaray Mexico.
Baaxadda waxyaabaha la soo bandhigay:
1. Qaybaha iyo nidaamyada: qaybaha baabuurta iyo qaybaha, jiifku, jirka, unugga awoodda baabuurta iyo nidaamka elektarooniga ah iyo alaabada kale ee la xidhiidha
2. Qalabka iyo wax ka beddelka: qalabka gawaarida iyo qalabka gawaarida, aaladaha qaaska ah, wax ka beddelka gawaarida, qaabeynta qaabeynta qaabka mishiinka, hagaajinta naqshadeynta, wax ka beddelka muuqaalka iyo alaabada kale ee la xiriirta.
3. Dayactirka iyo dayactirka: qalabka iyo qalabka saldhigga dayactirka, habka dayactirka jirka iyo rinjiyeynta, maareynta xarunta dayactirka
4. Isaga iyo maaraynta: nidaamka maaraynta suuqa gawaarida iyo softiweerka, qalabka baaritaanka gawaarida, softiweerka maareynta gawaarida gawaarida iyo nidaamka, softiweerka caymiska gawaarida iyo nidaamka iyo alaabada kale ee la xiriira.
5. Kaalinta shidaalka iyo dhaqidda baabuurta: adeegga iyo qalabka saldhigga gaaska, qalabka lagu dhaqo baabuurta